Canaima 7: Ny Venezoeliana GNU/Linux Distribution dia namoaka dikan-teny beta | Avy amin'ny Linux
Canaima 7: Ny Venezoeliana GNU/Linux Distribution dia namoaka dikan-teny beta
Linux PostInstall | 09/05/2022 06:00 | Nohavaozina tamin'ny 09/05/2022 14:45 | Fitsinjarana, About us
Araka ny efa nambarantsika imbetsaka, ny sahan'ny Software maimaim-poana, Open Source ary GNU/Linux tsy hoe midadasika fotsiny izy io fa mitombo hatrany. Noho izany, famoronana, fanatsarana, fanitsiana, famoahana vaovao dia ny filaharan'ny andro foana, amin'ny resaka fandaharana, rafitra, ary mazava ho azy, Fizarana GNU / Linux. Ary zava-baovao tsy azo avela, dia ny zava-baovao mifandraika amin'ny famoahana na fandefasana ny beta ho an'ny daholobe voalohany ny dikan-teny ho avy «Kanaima 7» ny Distro Canaima GNU / Linux.
Ity dikan-teny ho avy amin'ny Canaima 7 (Canaima 7.0), dia manana ny anarany kaody "Imawari", Ho fanomezam-boninahitra ny Imawari Yeuta. Anarana maneho zohy ao amin'ny Canaima National Park, Bolivar State, avy amin'ny firenena niavian'ny GNU/Linux Distribution, izany hoe, Venezoela.​ Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia hanao a tsara famerenana amin'izay entiny indray, hoy ny beta ho an'ny daholobe voalohany, toy ny efa nataontsika tamin'ny fotoana hafa.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana tanteraka amin'ny lohahevitra androany momba ny zava-baovao «Kanaima 7», izay koa ny Fitsinjaram-panjakana ofisialy Venezoeliana, dia avelantsika ho an’ireo liana ireto rohy manaraka ireto amin’ireo zavatra vita an-tsoratra mifandray teo aloha. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"Eny fampiasana ny Canaima GNU/LINUX any Venezoelà dia tena fahita any amin'ny sekolim-panjakana sy sekoly ambony Venezoeliana, ary koa ao amin'ny Foibe Bolivariana momba ny Informatika sy Telematika (Cbit), ary ny Infocenters. Fanampin'izany, ny solosaina finday Canaima Educational Project sy ny solosaina novokarin'ny orinasam-panjakana Venezoeliana ho an'ny Indostria Teknolojia (VIT) dia miasa eo ambanin'ity Rafitra fiasana GNU/Linux mifototra amin'ny DEBIAN 6 sy 7 ity, ary tsy ho ela dia ao amin'ny DEBIAN 8”. Torohevitra momba ny Canaima GNU / Linux 5.0
CANAIMA GNU / LINUX: Hanao ny enti-modinao fotsiny?
Canaima4 amin'ny dingana beta
1 Canaima 7: Fizarana rindrambaiko malalaka Venezoeliana
1.1 Inona no atao hoe Canaima GNU/Linux?
1.2 Momba an'i Canaima 7
1.3 Famerenana ny beta voalohany misy
Canaima 7: Fizarana rindrambaiko malalaka Venezoeliana
Inona no atao hoe Canaima GNU/Linux?
Alohan'ny handinihana ny lafiny teknika amin'ity beta ampahibemaso voalohany ity Canaima 7, ary ho an'izay tsy dia mahalala an'izany Venezoeliana GNU/Linux distribution, marihina fa a Rafitra fandidiana maimaim-poana izay efa naorina teo ambanin'ny fenitra misokatra.
Ary ny tanjona voalohany indrindra dia ny manamora ny fizotry ny fifindra-monina mankany amin'ny Software Free ao amin'ny rafitra, tetikasa ary serivisy an'ny National Public Administration (APN) an'ny Fanjakana Venezoeliana. Ambonin'ny zava-drehetra, dia efa nampiasaina betsaka tamin'ny tetikasa fanabeazana sy ekipa, amin'ny anaran'ny Fampianarana Canaima.
Momba an'i Canaima 7
Avy amin'ny zavatra kely fantatra amin'izao fotoana izao dia afaka manaraka ny famerenana beta ho an'ny daholobe voalohany, lazao ireto manaraka ireto:
Izy io dia mifototra amin'ny Debian-11 (Bullseye).
Ampiasao ny Kernel 5.10.0.9
Ampiasao ny LibreOffice 7.0.4.2
Ampiasao ny Firefox 99.0.1
Mitondrà Thunar 4.16.8
Tsy misy afa-tsy amin'ny GNOME (3.3 GB) sy XFCE (2.9 GB) amin'ny dikan-teny 64 Bit (AMD64).
Fanjifana RAM eo ho eo amin'ny fanombohana manodidina ny +/- 512 MB.
Ahitana lohahevitra maizina sy lohahevitra maivana izy io.
Ho an'ny alaivo ary andrana, misy ireto rohy manaraka ireto:
Mandritra ny mandray anjara amin'ny fampandrosoana azy miaraka amin'ny fanehoan-kevitra, fitsapana na mihoatra, misy ireto manaraka ireto Vondron-telegram:
Canaima GNU / Linux
Fiaraha-miasa ara-teknika Canaima
Famerenana ny beta voalohany misy
avy eo pikantsary sy fanazavana ny fikarohana sy ny fampiasana ny beta voalohany an'ny Canaima 7:
Manomboka ny Canaima 7 ISO miaraka amin'ny XFCE Desktop Environment ao amin'ny VirtualBox Virtual Machine
Ecran Desktop voalohany
XFCE Control Panel
Ireo singa amin'ny sakafo afovoany ambany
Afeno ny widget windows rehetra
Element panel ambony
Ny varavarankelin'ny fidirana sy ny fivorian'ny mpampiasa
Menu fitantanana session mpampiasa
Farany, zava-dehibe ny manamarika fa amin'izao fotoana izao tranokala ofisialy Havaozina izy io, mba hampisehoana tsy ho ela ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny dikan-teny ho avy. Na izany aza, ny fampahalalana ofisialy bebe kokoa momba ny GNU/Linux Distribution sy ny tetikasa amin'ny ankapobeny dia azo jerena amin'ireto rohy manaraka ireto: Canaima GNU / Linux 1 y Canaima GNU / Linux 2, Fampianarana Canaima.
Ary ho an'ny lahatsoratra manaraka mifandraika amin'ny Canaima 7, hasehontsika ny dingana fametrahana ny beta ho an'ny daholobe voalohany, ho fanombanana tsara kokoa momba izany.
Raha fintinina, ity beta ho an'ny daholobe voalohany Toa ezaka tsara ny hamerina amin-kery ny Canaima GNU/Linux tetikasa. Azo antoka fa tsy ho ela dia ho afaka handroso amin'ny dikan-teny stable izy ireo, ary azo ampiharina amin'ny mpampiasa azy amin'izao fotoana izao, ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Indrindra amin'ireo solosaina manana loharanon-karena CPU/RAM ambany, toy ny mahazatra ny antso Canaimites (minilaptops fampianarana). Izay matetika tonga miaraka amin'ny hoe Operating System, fa misy dikan-teny tranainy be (3, 4 ary 5).
Manantena izahay fa tena ilaina ho an'ny rehetra ity publication ity «Comunidad de Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux». Ary aza adino ny maneho hevitra eto ambany, ary zarao amin'ny hafa amin'ny tranokalanao, fantsona, vondrona na vondrom-piarahamonina sosialy na rafitra fandefasana hafatra tianao indrindra. Farany, tsidiho ny pejy fandraisanay ao «Avy amin'ny Linux» hizaha vaovao bebe kokoa, ary hiditra amin'ny fantsona ofisialinay Telegram avy amin'ny FromLinux, Andrefana vondrona raha mila fanazavana fanampiny momba ilay lohahevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Canaima 7: Ny Venezoeliana GNU/Linux Distribution dia namoaka dikan-teny beta
2 hevitra, avelao ny anao
Motlke dia hoy izy:
hace 2 volana
> Mampiasà LibreOffice 4.0.7.2
Heveriko fa nafangaronao ny isa, satria ny sary LO dia mampiseho fa ny version dia 7.0.4.2.
Valio an'i Motlke
Linux PostInstall dia hoy izy:
Miarahaba, Motlke. Misaotra anao amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fandinihanao fa efa namboariko.
Valio ny Linux Post Install
Tonga ny Chrome OS 101 miaraka amin'ny endri-panavaozana vaovao, fanatsarana ary maro hafa
Nopotehin'i NiceHash tamin'ny fomba ofisialy ny limiter LHR Nvidia